Filimka caawo ASTAAN TV saaran Neevevaro (2018) filim jaceyl iyo qayaano isku jiro ah – Filimside.net
Filimka caawo ASTAAN TV saaran Neevevaro (2018) filim jaceyl iyo qayaano isku jiro ah
February 21, 2019 Zakarie Abdi
Taariikhda: February 21, 2019
Caawo ASTAAN TV (Mogadishu) Kanaalka 5-aad waxaa hadda kasoo galay filimka Telugu ah Neevevaro (2018) oo laga wado Kumaa Tahay Adiga? waana filim qayaano iyo jaceyl isku jiro fariintiisana aad loo amaanay waxaana sheeko ahaan laga soo qaatay filimka Tamil-ka ah Adhe Kangal ee sanadii 2017 la daawaday wuxuuna dhankeena filim cusub ayuu ka yahay madaama fasiraadiisa nagu cusub tahay.
Jilaayaasha filimkan: Aadhi, Taapsee Pannu iyo Ritika Singh
Xiliga la daawaday: 23 Aug 2018
Fariinta Filimka Neevevaro (2018) Oo Kooban: Kalyan (Adhi) waa indhoole cunto kariye ah wuxuuna leeyahay maqaayad asigoo ganacsiga guul ka gaaray. Gabadha lagu magacaabo Vennela (Taapsee Pannu) ayaa maqaayadiisa imaaneyso waxayna ka codsaneynaa maskiin tuugsado ah inuu caawiyo.
Kalyan wuxuu jeclaanaa Vennela sidoo kalena maalin ayuu guur ka dalbanaa weyna ka aqbalee dalabkiisa laakiin waxay u sheegee inuu dhib heesto madaama aabaheed deyn ku leeyihiin kuwo tuugo ah sidoo kalena ay ugu hanjabeen inay iyada afduubanayan haddii aabaheed lacagta siin waayo.
Kalyan ayaa ka balan qaadayo Vennela inuu lacagta deenta ah bixinaayo laakiin shil ayuu galayaa marka uu guriga ku laabto waxaana la dhigaa isbitaal mudo labo todobaad ah uu ku jiraayo wuuna miir daboolmaa.
Markan Kalyan soo kaco wuxuu weynaa Vennela wuxuuna ka cabsanaa in tuugadii afduubteen. Kadib waxaa xigaayo dhacdooyin la yaab leh oo qayaano badan ku hoos duugan yihiin.
Haddaba ugu dambeyntii Kalyan wuxuu oganaa in Vennela tuugo xariif tahay maxaa xigo oo dhico doono ayaa filimkan loo daawan doonaa.
Ka daawo fasiraada ASTAAN Films oo Afkaaga Hooyo kuugu soo turjumeen si aad wax badan kaga ogaatid filimkan xiisaha badan.
Fadlan hoos ka daawo goos gooska filimka Neevevaro (2018) oo xiiso badan:
Waxaa Aqrisay 904
Wallahi sxb hada ayaan horfadhiyaa Tvga. Filimka innaba caadi Ma ahan,waa sheeko xiiso leh😍😱😱😱😱.Adinkana aad ayaad umahadsantihiin hagarla aanta aad waxnoogu qabaneysaan🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏.Filimside
Asxabta Website magacisa iso dira